Bunndle - Mobile Application ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက် Martech Zone
Bunndle - Mobile Application ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 2, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မိုဘိုင်း application တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးပြီ။ ingenius ဒီဇိုင်းနှင့်တန်ဖိုးရှိသောကမ်းလှမ်းမှုများရှိသော်လည်းသင်လျှောက်လွှာကိုချွတ်ပြီးသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတင်နေသည်ကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ Bunddle ၎င်းတို့ကိုအလိုရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ optimization engine သည်အသုံးပြုသူများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသောသာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ပျမ်းမျှတပ်ဆင်မှုနှုန်းသည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။
အသုံးပြုသူများကိုဆက်သွယ်ပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံရမည့်အချိန်တွင် Bunndle ၏ optimization engine သည်မှန်ကန်သောအသုံးပြုသူများအားမှန်ကန်သောလျှောက်လွှာကိုလွယ်ကူစွာကမ်းလှမ်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများကိုဆော့ဝဲအစုအဝေးမှဖယ်ထုတ်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်ကိုတပ်ဆင်လိုသောအသုံးပြုသူများကိုရောက်ရှိရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်အတွင်းတပ်ဆင်မှုအားလုံးသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာမှလာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင့်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
အစစ်အမှန်ကြီးထွားမှု။ ရီးရဲလ်ဝင်ငွေ။ Bunndle ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ရာနှင့်ချီသောမိတ်ဖက်များနှင့်သန်းနှင့်ချီသောအသုံးပြုသူများကိုလစဉ်လတိုင်းရယူပါ။ သင်ကြိုက်သလောက်များပြားသောကုန်ပစ္စည်းများပေါင်းထည့်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးမှအချက်အလက်များကိုရယူပါ။
ရိုးရှင်းသော set up ။ အင်ဂျင်နီယာမလိုအပ်ပါ။
ငါတို့လုပ်ပြီးပြီ မင်းအတွက်လွယ်ကူတယ် စတင်ရန် သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုတင်ပါ၊ ကြော်ငြာကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုဖန်တီးပါ။ ငွေပေးချေပါ။ ဒါပဲ။ မင်းလမ်းကိုလျှောက်နိုင်အောင်ငါတို့ဒီကိုရောက်နေတယ်။ ဒါဆိုမင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။ ယခုဝင်မည်!
အကယ်၍ သင်သည်လျှောက်လွှာထုတ်ဝေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အပိုဝင်ငွေအချို့ကိုသင်မောင်းနှင်နိုင်သည် Bunddle သင်၏မိုဘိုင်း application သို့!
Tags: app ဖြန့်ဝေအက်ပ်ကွန်ယက်ကျောက်တံတားမိုဘိုင်း appမိုဘိုင်း app ကွန်ယက်မိုဘိုင်း application ကို
Douglas Karr Saturday, November 2, 2013 Sunday, October 4, 2015
Swirl - အဓိကလက်လီရောင်းချသူများအတွက် In-Store Mobile Marketing Platform
၂၅ Awesome Social Media Tools များ